Shirkii Amniga Qaranka oo Goordhowayd Baydhabo ka furmay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Shirkii Amniga Qaranka oo Goordhowayd Baydhabo ka furmay
Shirkii Amniga Qaranka oo Goordhowayd Baydhabo ka furmay
Magaalada Baydhaba waxaa goordhowayd si rasmi ah uga furmay shirka amniga Qaranka, kaas oo ay ka qeybgelayaan Madaxda ugu sarreysa dalka, kuwa Maamul Goboleedyada iyo Taliyayaasha kala duwan ee Ciidamada Soomaaliya.
Waxyaabaha diirada lagu saarayo shirka isla markaana looga hadlayo ayaa waxaa kamid ah xaalada guud ee amniga dalka,Isku dhafka Ciidanka iyo bixinta mushaharaadka iyo hirgelinta Nidaamka Federaalka dalka,waxaana madaxda dowlada Federaalka iyo kuwa dowlad Goboleedyada ay isla meel dhigayaan qorshaha iyo ajendaha mideysan ee ay la hortagayaan Shirka isna lagu wado in uu ka dhaco Brussels ee ay kasoo qeybgalayaan Waddamada taageera Soomaaliya.
Waa shirkii Labaad oo ay yeeshaan madaxda heer qaran iyo heer maamul goboleed ,waxa uuna dhacaa saddexdii biloodba mar ,iyadoona sida qorshuhu uu yahay shirkan uu socon doono mudo labo maalmood ah oo maanta ka bilaabmanaysa.
Amaanka goobta uu shirku ka dhacayo ayaa aad loo adkeeyay iyadoona la geeyay ciidamo isugu jira nabad sugid,boolis,iyo Milatari.
Muuse: Farmaajo Intii uu xilka yimi Somaliland waxay Kala kulantay cadaawad aan hore loo arag 28-kii sanno
July 20, 2019 By Keyse Aadan